Xiaomi က Mi7အတွက် Face ID ကို ဖန်တီးနေသလား ? – DigitalTimes.com.mm
2583 Shares 642 Views
Xiaomi က Mi7အတွက် Face ID ကို ဖန်တီးနေသလား ?
ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာတဲ့ Mi7ရဲ့ ဓါတ်ပုံများအရ မျက်နှာပြင် အထက်မှ Notch မှ ကင်မရာများဟာ Apple Face ID ရဲ့ ကင်မရာများနဲ့ ဆင်တူနေပါတယ်။ ဓါတ်ပုံများမှာ ကင်မရာ အတွင်းပိုင်းကို အသေးစိတ်မြင်နေရပါတယ်။ Apple Face ID ဟာ သင့် မျက်နှာဖြင့် ဖုန်းကို Unlock လုပ်ဖို့အတွက် အနီအောက်ရောင်ခြည် ကင်မရာနဲ့ Dot Projector ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အောက်ကပုံကတော့ Mi7ရဲ့ ကင်မရာများ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ကပုံကတော့ Apple Face ID ရဲ့ ကင်မရာများ ဖြစ်ပါတယ်။
Geekbench မှာ ထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များအရ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Xiaomi Mi7မှာ ၅.၆၅ လက်မ Full HD+ Display တပ်ဆင်ထားပြီး အခုခေတ်စားနေတဲ့ မျက်နှာပြင် အရှည် ဒီဇိုင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာ 16MP+16MP Dual Camera များ ပါလာနိုင်ပါတယ်။ 64GB နဲ့ 128GB Storage Model များ ထုတ်လုပ်ပေးထားနိုင်ပြီး ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ် ပါလာနိုင်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Qualcomm Snapdragon 845 Chipset ထည့်သွင်းထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပေါကျကွားထှကျပျေါလာတဲ့ Mi7ရဲ့ ဓါတျပုံမြားအရ မကျြနှာပွငျ အထကျမှ Notch မှ ကငျမရာမြားဟာ Apple Face ID ရဲ့ ကငျမရာမြားနဲ့ ဆငျတူနပေါတယျ။ ဓါတျပုံမြားမှာ ကငျမရာ အတှငျးပိုငျးကို အသေးစိတျမွငျနရေပါတယျ။ Apple Face ID ဟာ သငျ့ မကျြနှာဖွငျ့ ဖုနျးကို Unlock လုပျဖို့အတှကျ အနီအောကျရောငျခွညျ ကငျမရာနဲ့ Dot Projector ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ အောကျကပုံကတော့ Mi7ရဲ့ ကငျမရာမြား ဖွဈပါတယျ။
အောကျကပုံကတော့ Apple Face ID ရဲ့ ကငျမရာမြား ဖွဈပါတယျ။
Geekbench မှာ ထှကျပျေါခဲ့ဖူးတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားအရ စှမျးဆောငျရညျမွငျ့ Xiaomi Mi7မှာ ၅.၆၅ လကျမ Full HD+ Display တပျဆငျထားပွီး အခုခတျေစားနတေဲ့ မကျြနှာပွငျ အရှညျ ဒီဇိုငျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အနောကျဘကျမှာ 16MP+16MP Dual Camera မြား ပါလာနိုငျပါတယျ။ 64GB နဲ့ 128GB Storage Model မြား ထုတျလုပျပေးထားနိုငျပွီး ကွိုးမဲ့အားသှငျးစနဈ ပါလာနိုငျပါတယျ။ စှမျးဆောငျရညျမွငျ့ Qualcomm Snapdragon 845 Chipset ထညျ့သှငျးထားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဇွန်လမှာ မောင်းသူမဲ့ ဘတ်စ်ကားများကို စတင် ပြေးဆွဲမယ့် နော်ဝေး
OnePlus6နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို ပြသလိုက်တဲ့ CEO